China Pallet Racking System Kugadzira uye Fekitori | Huade
Pallet racking ndeye yekushandisa inobata yekuchengetedza sisitimu yakagadzirirwa kuchengetedza palletized zvinhu. Kune akawanda marudzi epallet racking, iyo inosarudzika rack ndiyo yakajairika mhando, iyo inobvumidza kuchengetwa kwemapareti zvigadzirwa mumatanho akatwasuka ane akawanda mazinga. Marori eforklift anowanzodiwa kuti aise mapallet akatakurwa mumachira ekuchengetedza. Mapallet racks ave chinhu chakakurumbira mumatura mazhinji emazuva ano, zvigadzirwa zvekugadzira, supamaketi, uye zvimwe zvekuchengetedza uye zvekuparadzira zvivakwa. Mhando dzese dzeparlet racking dzinowedzera kuwanda kwekuchengetedza kwezvinhu zvakachengetwa. Mariro inosanganisirwa neiyo racking inowedzera pamwe nekuwedzera kwehuwandu hwekuchengetedza.
Yakajairwa inosarudzika pallet racking ndiyo inonyanya kuita, inozivikanwa sisitimu pamusika. Ichipa yakananga kuwana forklifts kune yega uye yega pallet, inosanganiswa newaya decking, bhawa rutsigiro kana inoshuvira pani masherufu, iyo pallet racking ndiyo yakanakisa mhinduro kumatura ane akasiyana akasiyana zvigadzirwa pane pallets. Kureba kwemakona, kureba kwedanda uye hupamhi hwepaseji zvakagadzirirwa kune forklifts, saizi pallet uye kukura kweimba yekuchengetera, uye chimiro chiri kuwedzera.
Zvakajairika zvikamu zveparlet racking system:
Takura matanda senge nhanho matanda kana bhokisi mabhanzi Mafuremu akarurama
Diagonal brace uye yakatwasuka brace Nhovo inotsigira
Wire decking Netsoka
Mahwendefa eShim Mutsara spacers
Column vadziviriri Guard njanji
Zvakanakira pallet racking:
Zviri nyore kuwedzera
Kugadzikana kune akasiyana mhando mutoro mhando, kureva huremu uye vhoriyamu
Sangana nemarefu akareba ematanho ekutora zvinhu
Rack-yakadzika racks (4 pallets back-to-back pachinzvimbo che2) inogona kuiswa kuti iwedzere iyo yekuchengetedza masimba
Yakatetepa Aisle racking system inosiya yakamanikana nzira kune yakasarudzika forklifts, ichiwedzera iyo yekuchengetedza huwandu
Huade pallet racks inogadzirwa kubva kuchiratidzo chepamusoro-simba simbi zvinoreva kuti chimiro chakasimba, chakavimbika uye chakachengeteka. Kugadzira pallet racks yakagara iri imwe yenzvimbo dzakakosha dzeHuade dzehunyanzvi.
Nyanzvi dzedu dzekushandira dzichashanda newe kuti usarudze mhinduro yekuchengetera uye nekukutsigira iwe nguva dzese kuburikidza nezvikamu zvese zveprojekti.
Pashure: Shuttle Racking Sisitimu
Zvadaro: Cantilever Rack